ONLF oo beenisay in ay xiriir la leedahay Al-shabaab – XAMAR POST
Afhayeenka Ururka ONLF, ayaa u sheegay Idaacadda Mustaqbal in ay been abuurtahay hadalka ka soo baxay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegaya in ONLF ay xiriir la leedahay ururro Argagixiso ah.
Afhayeenku Hirmooge waxaa uu Idaacadda Mustaqbal u sheegay in Al-shabaab iyo ONLF ay ku dagaallameen gudaha dowlad degaanka Soomaalida sidoo kalena madax sare oo ka tirsanaa ONLF ay Al-shabaab ku dileen gudaha Soomaaliya.
Warka ka soo baxay Dowladda Soomaaliya ee sheegaya in Al-shabaab iyo ONLF ayuu ku sheegay in uu yahay mid aan sal iyo raad lahayn islamarkaana laga been abuurtay ONLF.
Arrintan waxaa ay imaneysaa iyada o xalay war ka soo baxay Xarakada Al-shabaab ay ku beenisay in ay xiriir la leedahay ONLF iyo C/Kariin Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax oo ay dowladdu sheegtay in uu la shaqeynayay Al-shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in Qalbi-dhagax oo ka tirsanaa Guddiga fulinta ONLF uu xiriir lalahaa Al-shabaab sidoo kalena falal amniga liddi ku ah ka waday gudaha Sooomaaliya.